DIY ရေစိုခံကလေးများအမည် တံဆိပ်တုံးကိုဝယ်ပါ | WoopShop®
DIY ရေစိုခံ ကလေးအမည် တံဆိပ်တုံး
လက်ဝဲ လွန်ခဲ့သော နောက်တစ်ခု မှန်သော
$21.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $34.99
ပုံနှိပ်တိပ် 400 စင်တီမီတာ
အပြာခွံပန်းရောင်အခွံပုံနှိပ်တိပ် 400 စင်တီမီတာမင်နက်ပေါင်းစပ်ပေါင်းစပ် 2လိမ္မော်သီးငွေဇီးကွက်နှင့် စတစ်ကာခွေးနှင့်စတစ်ကာကြောင်နှင့်စတစ်ကာပန်ဒါနှင့် စတစ်ကာဇီးကွက်ခှေးကွောငျပန်ဒါ
DIY ရေစိုခံ ကလေးအမည် တံဆိပ်တုံး - အပြာခွံ backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
theme: တိရိစ္ဆာန်များ & သဘာဝတရား
လက်မှတ်: စီအီး, CCC
လက်မှတ်: တရုတ် (3C) သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်း
ခေတ်အကြံပြု: ၄-၆ နှစ်၊ ၄-၆ နှစ်၊ ၁၂ + y
ပုံနှိပ်တိပ်: 400 စင်တီမီတာ (၎င်းသည်ဗလာဖြစ်ပြီးတံဆိပ်နှင့်အသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်)
တံဆိပ်ခေါင်း- တံဆိပ်ခေါင်း၊ 20 စင်တီမီတာ ပုံနှိပ်ထားသော တိပ်နှင့် ပလပ်စတစ်သေတ္တာ ပါရှိသည်။
၎င်းကို ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်မင်ဖြင့် အကြိမ် ၁၀၀၀ ခန့် ရိုက်နှိပ်နိုင်သည်။
မှတ်စုတွင် နာမည်ချန်ထားခဲ့ပါ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။
71 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ် အခြေခံ.
အရည်အသွေးပြည့်မီသော ပစ္စည်းများအတွက် ဆိုင်ကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကောင်းစွာထုပ်ပိုးခဲ့သည်။ အနုတ်အမြောက်အမြားသည် ကြာရှည်စွာ မစောင့်နိုင်လျှင် သုံးလ၊
ကမ္ပည်းစာသည် ပုံနှိပ်တွင်ရှိသင့်သည်၊ ဖောက်ထွင်းမြင်ရသည့်ကိစ္စဖြင့် ပေါ်လာသည်၊ ပြတ်ပြတ်သားသား ရိုက်နှိပ်ထားသောကြောင့် ၎င်းကို ကျောဘက် သို့မဟုတ် ရှေ့ဘက်တွင် မြင်နိုင်သည်။ ကမ္ပည်းပြားကို အမှောင်ထည်ပေါ်တွင်ပင် မြင်တွေ့နိုင်သည်။ နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်တွင် အမိန့်ချခဲ့ပြီး ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်တွင် စာတိုက်သို့ ရောက်လာသည်။
ဖြစ်သင့်သလောက်ပါပဲ။ ကျေနပ်သည်! စာလုံးတွေက ကြီးတယ်၊ မြင်နိုင်တယ်။
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ပုံနှိပ်အရည်အသွေးအတွက် ဝမ်းသာပါတယ်!!! သေတ္တာထဲတွင် အကုန်ထုပ်ပိုးထားပြီး အနက်ရောင်အရာများအတွက် တိပ်များထည့်ထားသည်။) စာရွက်ပေါ်မှာ ခြစ်ထားတယ်၊ အားလုံး အဆင်ပြေတယ်။ အရွယ်အစားက သေးသေးလေးနဲ့ ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်)))) ပါဆယ်ထုပ်က မော်စကိုမှာ 1,5 လကြာတယ်။ သြော်၊ ရောင်းသူကို လူတိုင်းကို အကြံပေးပါတယ်။ စူပါ! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မေးထားသလိုပဲ သေးသေးလေးပေမယ့် ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်။